Mina Holland | Ikhaya | Isayensi yokubhebhetha:
Mayelana ne-I Holland
Izindleko Eziphezulu Zokugijima
Izincwajana & Izindiza
Amafomu Esicelo Sesicelo
Isitatimende saseHolland Covid-19
Njengomhlinzeki obalulekile embonini yezemithi yomhlaba, sifuna ukukhuthaza amakhasimende ethu nababambisene nathi ukuthi sizinikele ku-100% ukwenza konke okusemandleni ethu ukuxhasa ibhizinisi lakho kanye nokulwa ne-COVID-19.
Siyazi futhi siyaziqhenya ngeqhaza elibalulekile esilibambile kulezi zikhathi ezinzima. Sibonga kakhulu abasebenzi bethu, kanye nabasebenza nabo embonini yezemithi ngawo wonke umsebenzi abawenzayo ukuxhasa ukwelashwa kwalolu bhubhane.
Sicela uchofoze lapha ukubuka isitatimende sethu sonke.
Uyemukelwa e-I Holland
Lapha e-I Holland besilokhu senza izibhakela futhi sifa iminyaka engaphezu kwengu-75 okusenza ukuthi sibe ngabakhiqizi bamathuluzi wokuminyanisa ithebhulethi abade kunabo bonke emhlabeni. Okusihlukanisa nabanye abenzi bamathuluzi wethebhulethi yindlela yethu eyingqayizivele ekwakhiweni, ekuthuthukisweni nasekulethweni kwephrojekthi yakho ngazinye. Sizosebenzisana nawe kuzo zonke izigaba kusukela kumqondo wokuqala wamaphilisi amasha kuya ekuxazululeni inkinga yemikhiqizo ekhona. Njalo isibhakela esisodwa futhi sifa esikhiqizayo kuyisipoke. Asihlinzeki ngamathuluzi avela kusitoko.
Inhloso yethu enkulu ukukhulisa umkhiqizo wakho kanye nokwenza ngcono ukusebenza kahle kwesitshalo sakho. Lokhu sikufeza;
1. Isazi sethu design Iqembu likusiza ukudala ithebhulethi eyenelisa amanani akho omkhiqizo kepha inciphise izindaba zokukhiqiza.
2.Uqinisa okulungile imininingwane yethebhulethi njengobulukhuni, isisindo nobukhulu kutholakala futhi kugcinwe.
3. Ukunciphisa isikhathi sakho sokuphumula ngokususa izinkinga zokukhiqiza ezijwayelekile - ukunamathela, ukubamba kanye nokuhlanza phakathi kokunye.
4. Yehlisa izindleko zakho ngethebhulethi yinye ngempilo ende yethuluzi futhi ukulungiswa kwamathuluzi ochwepheshe.
5. Ukwabelana ngolwazi nobuchwepheshe bethu ngobubanzi ukuqeqeshwa nokusekelwa kwezobuchwepheshe.
Konke lokhu, lapho kuhlanganiswa nesivinini sokuphendula, kuletha okuhlangenwe nakho kwamakhasimende okungenakuqhathaniswa ngaphakathi komkhakha wethu.
Amaphayiphu Aphelele Amanani ancintisanayo
Kuyashesha futhi kulula ukwenza uphenyo. Chofoza isixhumanisi esingezansi ukuqala ukwenza amaphilisi angcono namuhla.
I-PharmaGrade® uhla lwamasheya luzuza ukulingana okuhle kwezimpawu. Lokhu kuhlinzeka ukuqina nokukhiqiza, kunikeze ukusebenza ngempumelelo ekusetshenzisweni kwe-tablet compression.
I-PharmaCote yethu® uhla lwezindlela zokwelapha nezembozo ezenza ngcono ukusebenza kwe-PharmaGrade® insimbi yensimbi yamaphampu futhi iyafa.
E-Holland siyabona ukubaluleka kocwaningo nokusebenzisana namakhasimende nabalingani bethu besayensi ngokufanayo. Lokhu kusiza ukwakhiwa kwemikhiqizo emisha, eqinile futhi enokuncintisana.
Mina Holland ngineminyaka engaphezu kwengu-70 yesipiliyoni ekuxazululeni izinkinga zokukhiqiza ithebhulethi. Sikholelwa ekusebenzeni ngokubambisana namakhasimende ethu ukudlulisa ulwazi lwethu.
Izindaba Zamuva Nemicimbi
Mina Holland ngimemezela uchungechunge olusha lwe-webinar ekugcinweni kwamathuluzi kwe-2021
Akuyona imfihlo! Amathuluzi agcinwe kahle futhi agcinwa ngokucophelela akwenzela imali. Thuthukisa ukubuya kwakho ekutshalweni ngalolu chungechunge lwe-webinar lapho sizobe sichaza kahle ukuthi kungani kuliqiniso lokho. Izobanjwa ngoLwesine lokugcina lwenyanga ngayinye uFebhuwari - Aug 2021.
Impumelelo enhle enkambweni yokuqala yokuxazulula inkinga online - Nov 2020
Mina Holland ngisingathe isifundo sethu sokuqala se-Troubleshooting Tablet Production Online ngoNovemba 2020. Ukugcina wonke umuntu ephephile ngaphandle kokubeka engcupheni yokuhamba. Ngenxa yokuphumelela komcimbi, i-Holland ngizoqhubeka nokusingatha izifundo eziningi eziku-inthanethi njalo.
Uchungechunge lwe-Webinar YAMAHHALA - Ukulungiswa Kwamathuluzi - Lubricate & Store - 29th Julayi 2021
Akuyona imfihlo! Amathuluzi agcinwe kahle futhi agcinwa ngokucophelela akwenzela imali. Thuthukisa ukubuya kwakho ekutshalweni ngalolu chungechunge lwe-webinar lapho sizobe sichaza kahle ukuthi kungani lokho kuyiqiniso.
Okokuqala, ukuhlanza i-tooling yakho!
I-Linkedin-in Facebook-f Twitter Youtube
Inqubomgomo Yemfihlo | © Copyright I Holland Ltd 2019
Isiza ngu ILowaire